စျေး ၀.၄ မီလီမီတာရှိဆီလီကွန်အမိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဖန်မျှင်ထည်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Chengyang
0.4mm Silicon Coated Fiberglass အထည်ကိုဖန်မျှင်ထည်အောက်ခံအထည်မှပြုလုပ်ထားပြီးအထူးပြုလုပ်ထားသောဆီလီကွန်ရာဘာဖြင့်တစ်ဖက် (သို့) နှစ်ဖက်စလုံးကိုစိမ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဆီလီကွန်ရော်ဘာသည်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအားကောင်းမှုကြောင့်ခွန်အား၊ အပူပေးမှု၊ မီးဘေးကာကွယ်နိုင်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်စေရုံသာမကအိုဇုန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အောက်ဆီဂျင်အိုမင်းခြင်း၊ အလင်းအိုခြင်း၊ ရာသီဥတုအိုမင်းခြင်း၊
0.4mm Silicon Coated Fiberglass အထည်ကိုဖန်မျှင်ထည်အောက်ခံအထည်မှပြုလုပ်ထားပြီးအထူးပြုလုပ်ထားသောဆီလီကွန်ရာဘာဖြင့်တစ်ဖက် (သို့) နှစ်ဖက်စလုံးကိုစိမ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဆီလီကွန်ရော်ဘာသည်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအင်ဇိုင်းကြောင့်ခွန်အား၊ အပူပေးမှု၊ မီးဘေးကာကွယ်နိုင်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးရုံသာမကအိုဇုန်းလွှာ၊ အောက်စီဂျင်အိုမင်းခြင်း၊ အလင်းအိုခြင်း၊ ရာသီဥတုအိုမင်းခြင်း၊
၁) ထူးခြားသောအပူချိန်ခံနိုင်မှု (-70 ° C မှ + 280 ° C)
4) မြင့်မားသော dielectric အစွမ်းသတ္တိ
၂။ သတ္တုမဟုတ်သောလျော်ကြေးပေးခြင်း၊ ၎င်းကို tubing အတွက် connector အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်
အတွက်ရေနံတွင်း၊ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ၊ ဘိလပ်မြေနှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ fields များ။
၁။ ထုပ်ပိုးခြင်းအသေးစိတ် - ပုံးတစ်လုံးစီကိုသေတ္တာထဲထည့်ပြီး၊ အထပ်သားအိတ်ထဲထည့်ပါ။
2. သစ်သားသေတ္တာအရွယ်အစား: တစ်မီတာရှည်လျားသောအမြင့်အကျယ်
3. သစ်သားသေတ္တာအရေအတွက်ပြန်ထုတ်ပေး: 200sets
ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီတစ်ကြိမ်တည်းပေးချေခြင်း။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီမှကောက်ယူခြင်း။ ။
နောက်တစ်ခု: အနက်ရောင် Fiberglass အထည်
Acrylic Coated ဖန်မျှင်ထည်, Pu Coated ဖန်မျှင်ထည်အထည်, Acrylic Coated Fiberglass အထည်, Acrylic ဖန်မျှင်ထည်အထည်, ဖန်ထည် Fiberglass, လူမီနီယံဖန်မျှင်ထည်အထည်,